Shikhar Samachar | सांसद यशोदा गुरुङलाई प्रश्नः स्वस्थानी च्यात्नुपर्छ भनेर तपाईँले किन बोलेको ? सांसद यशोदा गुरुङलाई प्रश्नः स्वस्थानी च्यात्नुपर्छ भनेर तपाईँले किन बोलेको ?
सांसद यशोदा गुरुङलाई प्रश्नः स्वस्थानी च्यात्नुपर्छ भनेर तपाईँले किन बोलेको ?
नेकपाकी सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले मंगलबार संसदको शून्य समयमा स्वस्थानीका पाना च्यात्नुपर्छ भनिन्। उनको अभिव्यक्तिले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा धेरैको ध्यान खिच्यो।